Piston အကြောင်းတစေ့တစောင်း - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Piston အ​ကြောင်း မ​ဖော်​ပြမှီ မီး​လောင်​ကျွမ်းမှုအ​ကြောင်းကို အနည်းငယ်​ ရှင်းပြလိုပါတယ်​။ အရာဝတ္တု တခု မီး​လောင်​ကျွမ်းရန်​အတွက်​ အ​ခြေခံအချက်​ ၃ချက်​လိုအပ်​ပါတယ်​။ ၄င်းတို့မှာ
၁။ ​လောင်​စာ ( fuel )
၂။ ​လေ ( oxygen )
၃။ အပူ ( heat )
စတဲ့ အချက်​၃ချက်​ရှိမှ အရာဝတ္တု တခုဟာ မီး​လောင်​နိုင်​ပါတယ်​။
Engine များတွင်​ Internal Combustion Engine ( အတွင်းမီး​လောင်​​ပေါက်​ကွဲအင်​ဂျင်​ ) ၄င်းကို အတို​ကောက်​အ​နေနဲ့ ( I . C . E engine ) ဆိုပြီး ထိပ်​ဆုံးစာလုံးများကို အတို​ကောက်​ရည်​ညွှန်း၍ ​ခေါ်ဆိုပါတယ်​။ ယခု​ခေတ်​ အသုံးပြု​နေကြ​သော engး အမျိုးအစားများ ဖြစ်​ကြပါတယ်​။ External Combustion Engine ( အပြင်​မီး​လောင်​​ပေါက်​ကွဲအင်​ဂျင်​ ) ၄င်းကို အတို​ကောက်​အ​နေနဲ့ ( E . C . E engine ) ဆိုပြီး ထိပ်​ဆုံးစာလုံးများကို အတို​ကောက်​ရည်​ညွှန်း၍ ​ခေါ်ဆိုပါတယ်​။​ရှေး​ခေတ်​က သုံးစွဲခဲ့​သော Boiler Engine များ ဖြစ်​ကြပါတယ်​( ဥပမာ - Titanic သ​င်္ဘောတွင်​ သုံးစွဲ​သော Engine ) စသည်​ဖြင့်​ engး အမျိုးအစား ၂မျိုးရှိပါသည်​။
I.C.E (Internal Combustion Engine) အတွင်းမီး​လောင်​​ပေါက်​ကွဲ အင်​ဂျင်​ ​တွေမှာ-
၁။ S.I engး နဲ့
၂။ C.I engး ဆိုပြီး နှစ်​မျိုးနှစ်​စားထပ်​ရှိပါတယ်​။
၁။ S.I engး
S.I engး ဆိုတာ (Spark Ignition system ) ပါ ...cylး အတွင်းမှာ မီး​လောင်​ ​ပေါက်​ကွဲဖို့အတွက် sparking plug အကူအညီယူပြီး မီး​လောင်​ ​ပေါက်​ကွဲ​စေတဲ့စနစ်​တခုပါ၊ cylးအတွင်း ​ရောက်​ရှိလာတဲ့ အချိုးအဆတခုနဲ့ ​ရောစပ်​ထား​သော fuelးair အချိုးကို pressure တခုအ​ရောက်​မှာ plug က​နေ မီး​ပေး​စေလိုက်​ခြင်းဖြင့်​ combustion တခုကို ဖြစ်​​ပေါ်​စေခြင်းပါ။(တနည်းအားဖြင့်​ ​ပြောရရင်​ sparking plug ကို အဓိက အားပြုပြီး ​ပေါက်​ကွဲရတဲ့ engး အမျိုးအစားပါ)
၂။ C.I engး
C.I engးဆိုတာ cylး အတွင်းမှာ မီး​လောင်​​ပေါက်​ကွဲဖို့အတွက်​ လိုအပ်​တဲ့ အပူတခုကိုpressure ဖြင့်​ (Compress)ဖိကျစ်​ဖန်​တီးယူပြီး fuel system တခုမှ fuel ဖြန်း​ပေးလိုက်​ခြင်းဖြင့်​ ​combustion တခုကို ဖြစ်​​ပေါ်​စေခြင်းပါ။(တနည်းအားဖြင့်​ ​ပြောရရင်​ compression (ဖိကျစ်​ခြင်း) ကို အဓိက အားပြုပြီး ​ပေါက်​ကွဲရတဲ့ engးအမျိုးအစားပါ)။
အထက်​က ​ဖော်​ပြပြီးသလို engး တလုံးတွင်​ ဖြစ်​​ပေါ်မည့်​ မီး​လောင်​​ပေါက်​ကွဲမှုအတွက်​ အ​ခြေခံအ​နေဖြင့်​ အပူတခုလိုအပ်​ပါမည်​။ ထို လိုအပ်​​သောအပူကို piston က လုပ်​​ဆောင်​​ပေးပါသည်​။ cylး အတွင်း ​ရောက်​ရှိလာ​သော​လေကို piston က အ​ပေါ်သို့ တွန်း​ရွှေ့ဖိကျစ်​ပြီး အပူတခုအဖြစ်​သို့ ကူး​ပြောင်း​ရောက်​ရှိ​စေရန်​ လုပ်​​ဆောင်​​ပေးပါသည်​။ ထိုရရှိလာ​သော ​လေအပူထဲကိုမှ fuel ( ​လောင်​စာ ) ပက်​ဖြန်း​ပေးလိုက်​​သောအခါ [ ​လောင်​စာ + ​လေ + အပူ = မီး​လောင်​​ပေါက်​ကွဲ (combustion) ] မှုတခု ဖြစ်​​ပေါ်ပါသည်​။ ထို​ပေါက်​ကွဲမှုကမှတဆင့်​ ​ပေါက်​ကွဲအားဖြင့်​ piston အား ​အောက်​သို့ တွန်း​ရွေ့​စေပြီး crankshaft ကို လည်​ပတ်​မှု ဖြစ်​​ပေါ်​စေပါတယ်​။
ထို့​ကြောင့်​ piston သည်​ မီး​လောင်​​ပေါက်​ကွဲမှု​ကြောင့်​ ထွက်​​ပေါ်လာ​သော thermal stress (အပူဒဏ်​) အား အများဆုံး ခံရပါတယ်​။ ထိုအပူဒဏ်​ကို ခံနိုင်​ရည်​ရှိသည့်​ piston အား သတ္တု အမျိုးမျိုးဖြင့်​ ​ရောစပ်​၍ တီထွင်​ထုတ်​လုပ်​ကြပါတယ်​။ piston သည်​ အပူဒဏ်​ကို ခံနိုင်​ရည်​ရှိရမည့်​အပြင်​ ၊ ၄င်းမှာဖြစ်​​ပေါ်​နေ​သော အပူဒဏ်​အား လျင်​မြန်​စွာစီးကူး​စေ၍ အခြားအစိတ်​အပိုင်းများကို အပူဖြန့်​ဖြူး​ပေးရပါမည်​။ ဒါ​ကြောင့်​ အပူစီးကူးမှုလျင်​မြန်​​သော aluminium (အလူမီနီယမ်​) သတ္တု ကိုအ​ခြေခံပြီး piston များအား ထုတ်​လုပ်​ကြပါတယ်​။ piston ထုတ်​လုပ်​ပုံနည်းလမ်းစဉ်​ ၂မျိုးရှိပါတယ်​။ ၄င်းတို့မှာ casting (သတ္တု အရည်​အားမိုလ်​တခုအတွင်း သွန်း​လောင်းခြင်း) နှင့်​ forging ( အပူခံထား​သောသတ္တု အား ဖိအားအမြင့်ဖြင့်​​ထုရိုက်​၍ ပုံ​ဖော်​ခြင်း) ဟူ​သော နည်းများဖြင့်​ ပြုလုပ်​ကြပါသည်​။ forging နည်းဖြင့်​ ထုတ်​လုပ်​ထား​သော piston သည်​ casting နည်းဖြင့်​ထုတ်​လုပ်​​သော piston ထက်​ ခံနိုင်​ရည်​အား မြင့်​ပါသည်​။
Piston တလုံးတွင်​ ပါဝင်​​သော သတ္တု အချိုးအဆသည်​ ထုတ်​လုပ်​သူအ​ပေါ်မူတည်​၍ piston တမျိုးနှင့်​တမျိုး မတူညီကြ​ပေ။ piston တွင်​ ပါဝင်​​သော သတ္တု အမျိုးအစားအ​ပေါ်မူတည်​၍ piston ၏ အရည်​အ​သွေးနှင့်​ တန်​ဘိုး​ဈေးနှုန်းများလည်း အထိုက်​အ​လျောက်​ ကွာခြားကြပါသည်​။ casting ( သွန်း​လောင်းခြင်း) နည်းဖြင့်​ထုတ်​လုပ်​ထား​သော piston များသည်​ ကုန်​ကျစရိတ်​ အနဲဆုံးဖြစ်​ပါသည်​။ အားနဲ​သောအချက်​မှာ သွန်း​လောင်း​နေစဉ်​တွင်​ ​piston သတ္တု သားအတွင်း လေခိုပြီး vacuum (​လေဟာနယ်​) ဖြစ်​​ပေါ်​စေနိုင်​ပါသည်​။ piston သည်​ အပူဒဏ်​ ၊ အပူစီးကူးမှုအပြင်​ ​ပေါ့ပါးမှု ရှိဖို့လည်း လိုအပ်​ပါသည်​။ ထို့အတွက်​​ကြောင့်​ piston သတ္တု အား aluminium (အလူမီနီယမ်​) သတ္တု ကိုအ​ခြေခံပြီး အခြား သတ္တုများဖြင့်​ ​​ရော​နှောပေါင်းစပ်​ပြီးထုတ်​လုပ်​ကြပါသည်​။ ​ရှေးယခင်​က piston အား အခြားသတ္တုများဖြင့်​ ​ရော​နှော​ပေါင်းစပ်​၍ ထုတ်​လုပ်​ကြ​သော်​လည်း ယခုအခါတွင်​ ထို့ထက်​နည်းပညာမြင့်​မား​သော တီထွင်​မှုများဖြင့်​ ထုတ်​လုပ်​လာကြပါသည်​။ piston ထုတ်​လုပ်​ရာတွင်​ စဉ်းစားရသည့်​အ​ခြေခံအချက်​ မှာ အပူဒဏ်​ခံနိုင်​ရည်​ ရှိရမည်​ ၊ အပူစီးကူးမှုအား ​ကောင်းရမည်​ ၊ ​ပေါ့ပါး ခိုင်​ခန့်​ရမည်​။ ထုတ်​လုပ်​သူများသည်​ ထိုအချက်​များအား အ​ခြေခံစဉ်းစား၍ တီထွင်​ထုတ်​လုပ်​လာကြပါသည်​။
ထို့​ကြောင့်​ ယခုအခါတွင်​ piston အတွက်​ aluminium အတွင်း silicon ​ပေါင်းစပ်​ပြီး ထုတ်​လုပ်​လာကြပါသည်​။ silicon သည်​ အပူစုပ်​ယူမှုနည်းသည်​။ ခံစားရသည့်​အပူ​ကြောင့် aluminium သားအတွင်းပျော်ဝင်​ပြီး တသားတည်း​ပေါင်းစပ်​သွားသည်​။ ထို့အတွက်​​ကြောင့်​ အပူအား piston မှ စုပ်​ယူရသည့်​ အားလည်း​လျော့နဲသွားပါသည်​။ ထို့​ကြောင့်​ thermal stress ဒဏ်​ ခံရမှုနဲသည့်​အတွက်​ အပူ​ကြောင့်​ piston ပုံပျက်​ခြင်း ၊ piston အား liner နှင့်​ရိုက်​ခတ်​​စေသည့်​ဖြစ်​စဉ်​အား ​လျှော့ချနိုင်​လာပါသည်​။ ထိုနည်းတူစွာ engး မှထွက်​​ပေါ်မည့်​ noise ( ဆူညံမှု ) ကိုလည်း ​လျှော့ချနိုင်​လာပါသည်​။အဆိုပါ piston မျိုးကို Hypereutectic piston ဟု ​ခေါ်ဆိုကြပါသည်​။
Piston type ကို​ရွေးချယ်​ရာတွင်​ combustion chamber ၏ ထုထည်​ ၊ compression ratio စသည်​တို့အား အ​သေးစိတ်​တွက်​ချက်​ပြီးမှ သင့်​​တော်​မည့်​ piston type ကို ​ရွေးချယ်​၍ သုံးစွဲကြပါသည်​။
၁။ Dome piston type (ထိပ်​လုံး piston)
အဆိုပါ piston type အား2stroke engine များတွင်​ အများဆုံးအသုံးပြုပါသည်​။ အထူးသဖြင့်​ compression ratio မြင့်​ ​သော2stroke engine များတွင်​သုံးကြသည်​။
၂။ Bowl / Dish piston type (ထိပ်​ချိုင့် piston)
အဆိုပါ type အား compression မြင့်​လွန်း​သည့်​ combustion chamber ရှိ​သော engine များတွင်​ compression ratio ​လျှော့ချရန်​အတွက်​ အသုံးပြုပါသည်​။အထူးသဖြင့် turbocharger (သို့) supercharger ပါ​သော engine များတွင်​ detonation ဖြစ်​​ပေါ်မှုကိုရှောင်​ကြဉ်​နိုင်​ရန်​အတွက်​compression ratio ကို ​လျှော့ချရန်​ အဆိုပါ bowl (or) dish piston type ကို သုံးစွဲကြပါသည်​။များ​သောအားဖြင့်​ diesel engine များတွင်​ အသုံးများပါသည်​။ ထို type ကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်​ fuel spray ​(​ လောင်​စာဆီ ပန်းသွင်းမှု ) အား​ကောင်းမွန်​​စေပါသည်​။ sparking engine များတွင်​လည်း လျင်​မြန်​စွာ မီး​လောင်​​ပေါက်​ကွဲမှုကို ပြုလုပ်​​ပေးပါသည်​။
၃။ Flat piston type
အထက်​ပါ flat piston type တွင်​ ၂မျိုး ၂စားရှိပါသည်​။
၁။ plane flat top type (မျက်​နှာပြင်​လုံးဝညီညာ​နေ​သော) နှင့်​
၂။ flat top piston with valve relief ( piston နှာပြင်​တွင်​ Exhaust valve နှင့်​ Inlet valve အရာအချိုင့်​များပါ​သော ) type ဟူ၍ ၂မျိုး ၂စား ကွဲပြန်​ပါသည်​။
နံပါတ်​(၁) အမျိုးအစားသည်​ ထုတ်​လုပ်​မှုကုန်​ကျစရိတ်​ အသက်​သာဆုံး ပုံစံဖြစ်​ပါသည်​။ထို့​ကြောင့်​ ​ဈေးသက်​သာ​သော engine များနှင့်​ engine volume ​လျှော့ချလို​သော engine များအတွက်​အသုံးများပါသည်​။
နံပါတ်​(၂) အမျိုးအစားမှာမူ ထုတ်​လုပ်​မှုကုန်​ကျစရိတ်​ အနည်းငယ်​ မြင့်​မားပါသည်​။ ၄င်းအမျိုးအစားသည်​ compression ratio ကို မြင့်​မား​စေပါသည်​။ အထူးသဖြင့်​ piston ထိပ်​ဆုံး​ရောက်​ရှိချိန်​သည်​ compression ratio အမြင့်​ဆုံးအချိန်​ဖြစ်​ပါသည်​။ direct injection ဖြစ်​​သော diesel engine များတွင်​ swirl volume နှင့်​ turbulance အတွက်​ air flow အား​ကောင်းစွာဖြစ်​​ပေါ်​စေပါသည်​။
piston type အား​ရွေးချယ်​ရာတွင်​ မည်​သည့်​ engine အတွက်​ မည်​သည့်​ type အသုံးပြုမည်​ဟု ပုံ​သေသတ်​မှတ်​ချက်​မရှိပါ။ combustion chamber ၏ volume နှင့် compression ratio တို့အား တွက်​ချက်​ပြီးမှသာ ၄င်းနှင့်​ကိုက်​ညီမည့်​ piston type ကို ထုတ်​လုပ်​သူမှ ​ရွေးချယ်​သတ်​မှတ်​သုံးစွဲကြပါသည်​။
Piston တိုင်းတွင်​ piston slap ( piston ရိုက်​ခတ်​မှု) ရှိတတ်​ကြပါသည်​။အဆိုပါ ရိုက်​ခတ်​မှုသည်​ piston မည်​သည့်​​နေရာသို့ ​ရောက်​ရှိ​နေပါ​စေ ဖြစ်​​ပေါ်တတ်​ပါသည်​။ ဘယ်​အချိန်​တွင်​ အဖြစ်​များသနည်း ? engး အား စတင်​နှိုး​သောအချိန်​တိုင်းတွင်​ ဖြစ်​​ပေါ်တတ်​ပါသည်​။ မည်​သည့်​​နေရာတွင်​ အဓိက ရိုက်​ခတ်​​တတ်​သနည်း ? Piston skirt ​နေရာတွင်​ အများဆုံးရိုက်​ခတ်​ပါသည်​။
piston တလုံးအား သာမန်​ကြည့်​လျင်​ လုံးဝ ဝိုင်းစက်​​နေ​သောပုံဟု ထင်​မြင်​ရတတ်​ပါသည်​။ အမှန်​တကယ်​တွင်​​တော့ oval shape (ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်​) သာ ရှိပါသည်​။ combustion ​ကြောင့်​ဖြစ်​​ပေါ်​သောအပူ​ကြောင့်​သာ piston ပြန့်​ကားသွားပြီး အဝိုင်းပုံစံအပြည့်​သို့ ​ရောက်​ရှိပါသည်​။ engး ​အေးစ အချိန်​တွင်​ engး စနိုးနိုးချင်း piston သည်​ မပြန့်​ကား​သေးပါ၊ အချိန်​အနဲငယ်​အကြာ လုံ​လောက်​သည့် အပူချိန်​ရမှ ပြန့်​ကားလာရသည့်​အတွက်​ engး စနှိုးတိုင်းတွင်​ piston slap ဖြစ်​ရခြင်းဖြစ်​ပါသည်​။ သို့မဟုတ်​ပါပဲ piston မှ အချိန်​တိုင်း ရိုက်​ခပ်​သံ ထွက်​​ပေါ်​နေပါက engး အား စစ်​​ဆေးသင့်​​နေပါပြီ။
ထို့အတူ piston တွင်​ ​side thrust effect ဟူ​သော ဖြစ်​စဉ်​လည်း ရှိကြပါသည်​။ piston ​တွေရဲ့ side thrust effect (​ဘေးတိုက်​တွန်းခြင်း)အ​ကြောင်းကို အနည်းငယ်​ရှင်းပြလိုပါတယ်​။ piston တိုင်းဟာ engး သုံးစွဲသူရဲ့အ​ပေါ်ကိုမူတည်​ပြီး side thrust effect ဒဏ်​ကို အနဲနှင့်​အများ ခံစားကြရတဲ့ အစိတ်​အပိုင်း​တခုဖြစ်​ပါတယ်​။ piston တလုံးကိုယူပြီး piston pin ​ပေါက်​ရှိတဲ့အခြမ်းကို မိမိဘက်​တွင်​ထားပါ ၊ ပြီးရင်​ piston မျက်​နှာပြင်​ကို အ​ပေါ်စီးက​နေကြည့်​ပါ piston pin ​ဝန်​ရိုးရဲ့ ဘယ်​ဘက်​အခြမ်းနဲ့ ညာဘက်​ခြမ်း ဧရိယာ​တွေဟာ အဆိုပါ side thrust effect ကို ခံစားကြရတဲ့ ဧရိယာ​တွေပါပဲ။(piston pin ​ပေါက်​ရှိတဲ့ဘက်​ အခြမ်း​တွေမဟုတ်​ပါ ပုံနှင့်​တကွ ရှင်းပြ​ပေးထားပါတယ်​)
ဘယ်​အချိန်​မှာ ဘယ်​လို side thrust ဒဏ်​ခံစားရသလဲဆို​တော့ ​မီး​လောင်​​ပေါက်​ကွဲပြီးလို့ piston ​အောက်​ဘက်​ကို အရှိန်​နဲ့ဆင်းလာချိန်​မှာအဆိုပါ ဒဏ်​ကိုအပြည့်​အဝခံစားရပါတယ်​...​ပေါက်​ကွဲမှုရဲ့ force(အား)နဲ့ piston ကို​ဆောင့်​တွန်းချခံလိုက်​ရတဲ့အတွက်​ပါ၊ အဆိုပါခံစားချက်​ကို (major side thrust effect)လို့ ​ခေါ်ပါတယ်​။ ဒီဒဏ်​ကို engး အကြီးကြီး​တွေ(တနည်းအားဖြင့်​ cylးအ​ရေအတွက်​များတဲ့ engး​တွေမှာ lever ကို တဗျင်းဗျင်း တဗြဲဗြဲနဲ့ ​ဆော့ကစားခံရတဲ့ piston ​တွေမှာ) အဲ့ ဒဏ်​အများဆုံးခံစားရပါတယ်​။
piston အ​ပေါ်ဘက်​ကို တက်​တဲ့အချိန်​မှာကျ သူ့မှာ force(အား)သိပ်​မရှိ​တော့ပါဘူး၊ ဒါ​ကြောင့်​ အနည်းငယ်​ပဲ ဒီဒဏ်​ကို ခံစားရပါတယ်​၊ ဒါကို (minor side thrust effect) လို့​ခေါ်ပါတယ်​။ သူကလည်း လုံးဝ မခံစားရတာ​တော့မဟုတ်​ပါဘူး၊အနည်းငယ်​​တော့ခံစားရပါတယ်​။ ဒီသ​ဘောကို ဆင်​ခြင်​မိရင်​ engး ကြီး​တွေ​မောင်းနှင်​​နေတဲ့သူများ မိမိ engးကို lever ကစားခြင်း ​ရှောင်​ကြဉ်​နိုင်​ကြပါစေ ဗျာ...
( ငါးဖမ်းစက်​​လှေ​တွေမှာ တချို့ပဲ့နင်းများ lever ကစားတတ်​​လေ့ရှိကြပါတယ်​)။
များ​သောအားဖြင့်​ ဒီအက်​ကွဲတဲ့ ဒဏ်​ကိုခံရတဲ့ piston ​တွေက​တော့ piston ​တွေမှာ ​ချောဆီ oil groove slot ​မြောင်း​လေး​တွေပါတဲ့piston ​တွေမှာ အဖြစ်​များ​လေ့ရှိတာ..သုံးသပ်​မိပါတယ်​။ Piston တလုံးအား ကြည့်​ရှု စစ်​​ဆေးရန်​အတွက်​ piston အား အပိုင်း ၃ပိုင်းခွဲ၍ စစ်​​ဆေးပါ။
၁။ Piston head ( piston crown)
piston ၏ ထိပ်​ဆုံးအပိုင်းကို ​ခေါ်ဆိုပါတယ်​
၂။ Rings land & pin
piston ၏ piston rings နှင့်​ piston pin ရှိ​သောအပိုင်းကို ​ခေါ်ဆိုပါတယ်​
Piston ၏ ​အောက်​ပိုင်း( piston pin ၏ ​အောက်​ဘက်​အပိုင်းကို​ခေါ်ဆိုပါတယ်​)
Piston တလုံးတွင်​ရှိ​သော တည်​​နေရာ​ခေါ်ဆိုပုံများအား ပုံနှင့်​တကွ ​ပုံ(1) တွင်​ဖော်​ပြ​ပေးထားပါသည်​။ ပုံနှင့်​စာ တိုက်​ဆိုင်​ကြည့်​ရှု၍ ​လေ့လာကြပါရန်​။
piston တလုံး၏ total height (piston အမြင့်​) အား piston ၏ ထိပ်​ဆုံး​နေရာ အနားအမြင့်​မှ piston skirt ​အောက်​စွန်းအနားထိ အကွာအ​ဝေးကို ​ခေါ်ဆိုပါသည်​။
piston head (or) piston crown ၄င်းကို piston ring အ​ပေါ်ဆုံးကွင်း​နေရာမှ piston အ​ပေါ်ဘက်​မျက်​နှာပြင်​​နေရာအထိကို ​ခေါ်ဆိုပါသည်​။
Rings land (rings zone) ဆိုသည်​မှာ piston ring များ တည်​ရှိရာ​နေရာ အစိတ်​အပိုင်းကို ခေါ်ဆိုပါသည်​။
Top land ဆိုသည်​မှာ piston ring အ​ပေါ်ဆုံးကွင်း​၏အထက်​ တည်​ရှိရာ​နေရာကို ​ခေါ်ဆိုပါသည်​။
2nd land ဆိုသည်​မှာ ပထမ piston ring နှင့်​ ဒုတိယ piston ring အကြား တည်​ရှိရာ​နေရာကို ​ခေါ်ဆိုပါသည်​။
3rd land ဆိုသည်​မှာ ဒုတိယ piston ring နှင့်​ တတိယ piston ring အကြား တည်​ရှိရာ​နေရာကို ​ခေါ်ဆိုပါသည်​။
Rings groove ဆိုသည်​မှာ piston ring အထိုင်​ချ တပ်​ဆင်​ရာ ​မြောင်းက​လေးကို ​ခေါ်ဆိုပါသည်​။
Piston တလုံးမှာ ထိပ်​ဆုံးမှာရှိ​နေတဲ့ ring ကcompression ring ပါ၊ အလယ်​မှာရှိ​နေတဲ့ ring ​တွေက​တော့ intermediate ring ​တွေပါ၊ ​အောက်​ဆုံးမှာ ရှိ​နေတာက​တော့ oil control ring ​ပါ။ intermediate ring ​တွေကို wiper ring , scrapper ring ဟုလည်း ​ခေါ်ဆိုတတ်​ပါသည်​။
Piston တလုံးတွင်​ ဖိကျစ်​မှုကို အဓိက လုပ်​​ဆောင်​​ပေးရတာက အ​ပေါ်ဆုံးမှာ တည်​ရှိ​နေတဲ့ compression ring ပါ၊ intermediate ring (wiper) (scraper) ကွင်းက​တော့ ဒုတိယ အ​နေနဲ့ ဖိကျစ်​​ပေးတာပါ။ ၄င်းရဲ့ အဓိကလုပ်​​ဆောင်​ချက်​က oil control ring က liner ကို သုတ်​လိမ်း​ပေးခဲ့သည့်​ ​ချောဆီများကို ပြန်​လည်​ ခြစ်​ထုတ်​ယူသွားရန်​အတွက်​ အဓိက ရည်​ရွယ်​လုပ်​​ဆောင်​ပါတယ်​(ဒါ​ကြောင့်​လည်း ၄င်းကို wiper ring , scraper ring ဟု ​ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​)။
oil control ring က​တော့ piston နှင့်​ liner ​ပေါ်တွင်​ရှိ​နေ​သော အပူများအား ​ချောဆီမှတဆင့်​သယ်​​ဆောင်​ရန်​ နှင့်​ liner နှင့်​ rings များ၏ ပွတ်​တိုက်​မှုများအား ​လျော့နည်း​စေရန်​အတွက်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။ တချို့ engး များတွင်​ piston မှ အပူများအား ​လျှော့ချရန်​အတွက်​ piston cooling nozzle ဟု​ခေါ်ဆိုသည့်​ ​ချောဆီဖြန်း​ပေး​သော nozzle များအား liner ၏ ​အောက်​ဘက်​ crankase block အတွင်းဘက်​တွင်​ တပ်​ဆင်​​ပေးထားတတ်​ကြပါသည်​။
oil control ring groove ထဲတွင်​ရှိ​သော အ​ပေါက်​က​လေးများကို oil return hole ( ဆီပြန်​​ပေါက်​ ) ဟုခေါ်ဆိုပါသည်​။ Compression height ဆိုသည်​မှာ piston ၏ ထိပ်​ဆုံး​နေရာ အနားအမြင့်​မှ piston pin ​ပေါက်​၏ အလည်​​နေရာအထိကို ​ခေါ်ဆိုပါသည်​။
Piston pin ကို wrist pin ၊ gudgeon pin စသဖြင့်​ ​ခေါ်ဆိုပါသည်​။
Pin bore ဆိုသည်​မှာ Piston pin တပ်​ဆင်​သည့်​အ​ပေါက်​ကို ​​ခေါ်ဆိုပါသည်​။
Piston pin ​အောက်​ဘက်​က ​နေရာ​လေးအား piston boss ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။
Piston pin ​ဘေးရှိ ​နေရာအား side relief on full round ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။
Piston ထိပ်​ရှိ v/v ပုံစံအခွက်​က​လေးအား v/v relief ဟု ​ခေါ်ဆိုပါသည်။
Piston pin ​ပေါက်​အတွင်း အပြင်​​နေရာတွင်​ရှိ​သော ​​မြောင်းနေရာ​လေးကို pin lock groove ဟု ​ခေါ်ဆိုပါသည်။Piston pin ကို lock လုပ်​ရန်​အတွက်​ဖြစ်​ပါသည်​။
Piston ၏ မျက်​နှာပြင်​ ခုံး​နေ​သော ​နေရာအား dome height ဟု ​ခေါ်ဆိုပါသည်။
Piston ၏ မျက်​နှာပြင်​ ခွက်​ဝင်​​နေ​သော​နေရာအား bowl ဟု ​ခေါ်ဆိုပါသည်။
တချို့​သော Piston ၏ skirt ​နေရာတွင်​ အ​ပေါက်​က​လေးများ ပါရှိတတ်​ပါသည်​။ ထို​နေရာကို slot ဟု ​ခေါ်ဆိုပါသည်။
Piston တလုံးအား visual check (မျက်​မြင်​စစ်​​ဆေး) ရာတွင်​ piston crown များ အက်​ကွဲ​နေခြင်း ၊ ပွန်းစား​နေခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ piston bowl ​နေရာများတွင်​အက်​ကွဲ​နေခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ piston pin ​နေရာတွင်​ အက်​ကွဲ​နေခြင်း ၊ ပွန်းစား​နေခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ piston pin ၏ အခြားတဘက်​ခြမ်း​နေရာတွင်​ side thrust effect ​ကြောင့်​ ပွန်းစား​နေခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ piston skirt ​နေရာတွင်​ piston slap ​ကြောင့်​ ပွန်းစား ပဲ့​နေခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ piston to liner clearance ကို စစ်​​ဆေးရာတွင်​ piston အား piston ring နှင့်​အတူ liner အတွင်းထည့်​သွင်းပြီး piston နှင့်​ liner အကြား feller gauge ဖြင့်​ ထိုးသွင်းပြီး စစ်​​ဆေး​ပေးရပါမည်​။ စစ်​​ဆေးရာတွင်​ လက်​ခံနိုင်​သည့်​အတိုင်းအတာ တန်​ဘိုးများမှာ ပုံ​သေသတ်​မှတ်​ချက်​မရှိပါ။ ထုတ်​လုပ်​သူ၏ ညွှန်​ကြားချက်​ပေးထား​သော ကိန်းဂဏန်းတန်​ဘိုးများအတိုင်းသာ လိုက်​နာ​ဆောင်​ရွက်​ရပါသည်​။
Piston ပျက်​စီးမှု​အ​ကြောင်းရင်းအားစမ်းစစ်​ကြည့်​လျင်​ % အားဖြင့်​
၁။ ဆီပန်းသွင်းပုံ timing မမှန်​ခြင်း
၂။ exး ပိတ်​ဆို့ခြင်း​ကြောင့်​ 22%
၃။ engး load အလွန်​အကျွံ​မောင်း
၄။ cylး အတွင်းဆီများစွာ ​ရောက်​ရှိ
၅။ piston crown လုံ​လောက်​စွာ
ထို့အပြင်​ မည်​သည့်​​နေရာများတွင်​ ပျက်​စီး​လေ့အများဆုံး ရှိသည်​ကို စမ်းစစ်​ကြည့်​လျင်​
၁။ piston pin ပျက်​စီးမှု 29%
၂။ piston head ပျက်​စီးမှု 21%
၄။ piston skirt seize ခြင်း 17%
၅။ rings နှင့်​ skirt ပျက်​စီးခြင်း 7%
၆။ piston pin ကျိုးပဲ့ခြင်း 4%
၇။ piston pin seize ဖြစ်​ခြင်း 3% စသည်​ဖြင့်​ ​တွေ့ရှိရပါမည်​။